Saka ary saka maro hafa ao amin'ny fananganana freemium Cats & Magic | Androidsis
Cats & Magic dia lalao freemium vaovao izay ahafahanao manangana ny tontolon'ny saka na antsoina hoe catland. Lohateny freemium iray manontolo izay hahafahanao mankafy manana kittens mahafatifaty am-polony eo am-pelatananao.
Saika toy ny Ireo fohy fohy tsy hay hadinoina Warner, na dia mamonjy ny lavitra aza miaraka amin'ireny "zanak'akanjo mahafatifaty" io, ny Creative Mobile Games dia namoaka lalao izay hanadalana mpilalao marobe aloha noho ny lohahevitra voakasik'izany; efa fantatrao fa mahomby ireo horonantsary saka amin'ny Internet.
1 Kittenland amin'ny findainao
2 Lo cuco de Cats & Magic ary amin'ny Espaniôla
3 Lalao tena freemium, saingy iray izay tsy raharahain'ny maro
Kittenland amin'ny findainao
Cats & Magic dia lalao freemium vaovao iray izay iatrehantsika ireo lalao tokony hataontsika manangana trano samihafa am-polony mamorona singa sy maro hafa. Lalao karazana eo anelanelan'ny Hay Day sy Clash of Clans izy io, na dia fampifangaroana tsy fahita firy aza.
Ny marina dia izay nilalaovantsika ny zanakay tsy nandeha niady, hatramin'ny asantsika fototra, ankoatry ny fanatsarana sy ny famoronana tranobe vaovao, dia ny fizahana ny tany izay, mifototra amin'ny angovo, dia nahita harena vaovao izy ireo.
Esa ny angovo no fotony lehibe amin'ity lalao ity izay ilantsika azy handroso tsara. Lalao izay mampiavaka ny sary an-tsary sy izay rehetra mifandraika amin'ilay zavatra "mahafatifaty"; Ho tsikaritrareo fa androany dia namoaka lalao roa mifandraika akaiky amin'ny resaka sary sy lohahevitra izahay fa tsy ny zava-drehetra dia hitam-piadiana amin'ny sabatray na ny sambontsika.
Lo cuco de Cats & Magic ary amin'ny Espaniôla
Ka ny iraka ataontsika dia lehibe Raiso ity ho drafi-pialan-tsasatra faran'izay lehibe ary mankafy mankafy ny fananganana an'io kittens zaza io. Mazava ho azy, ny andraikitsika dia mitarika antsika koa hanangona saka maro ary hahafantatra ny toetrany tsirairay. Raha tianao ny alika dia efa fantatrao fa afaka manova ny lalao ianao, satria misy saka maro eto.
Farafaharatsiny, ho an'ny olona tsy mahazaka olona, ​​toa ilay manoratra dia io no fomba tsara indrindra hanakaikezana ny iray na maro. Raha nilaza an'izany izahay ny saka samy manana ny mampiavaka azy avyToy izany koa no mitranga amin'ny fahazarany, ny fahaizany ary ny lalao ankafizin'izy ireo, ka ankoatry ny fananganana dia mila manao ny tsirairay amin'izy ireo ianao.
Ny fikarohana dia tena ilaina ihany koa mitadiava tontolo hafa ary alefaso ireo zanany ho azy ireo. Kittens izay azonao atao ihany koa ny miakatra ary tena mahazatra ireo lalao ireo ary mety tsy ho hita amin'ny fomba hafa. Izany hoe hanana kittens hikarakara vitsivitsy ianao. Miverina amin'ilay voalaza etsy ambony momba ny alika ...
Lalao tena freemium, saingy iray izay tsy raharahain'ny maro
Cats & Magic dia lalao teraka amin'ny maha-izy azy: ho freemium ary miaraka amin'ny endrika hita maso izay tafiditra noho ny tonony mahafatifaty. Tsy hamita-tena isika fa izany no izy. Raha ny marina dia mampiseho ny angovo hatramin'ny fotoana voalohany izy ireo mba hahafantaranao fa misy izany. Na mandoa vola ianao mba handehananao haingana kokoa, na hiandry fotoana maro ianao avelanao ny fananganana hatao. Tsy misy zava-baovao amin'ireo faritra ireo, fa mampitandrina kosa izahay amin'ireto andalana ireto.
Eo am-pahitana azy izany ary hainy tsara ny milalao ny karany ho an'ireo mahalala fa ho mpilalao ho azy ireo. Volavolan-kittens mahafatifaty, volavolan-doko miloko mazava be amin'ny feo sy ireo fanamboarana rehetra ireo mba hahafahantsika miatrika tena tanindrazana. Eny, afaka mitsikera isika fa nampihena ny efijery ho 4: 3 ary zavatra tsy takatra izany. Manantena aho fa amboarin'izy ireo amin'ny fanavaozana manaraka ity.
Cats & Magic dia lalao bitika be izay tsy hahafahanao saka, mikarakara azy ireo sy ireo fotoana majika hanohizany hikarakara azy ireo. Lalao mahaliana izay mitarika antsika ampahafantaro anao ny Cat Quest, fihenam-bidy tsara kalitao kokoa, saingy iray izay manakaiky kokoa ny lalao hetsika sy fitsangatsanganana karazana RPG. Safidio fa manana safidy ianao.
Ho an'ireo izay tia saka dia lalao tena ilaina io, na dia tena freemium aza.
Hainy tsara ny milalao ny karany
Freemium be loatra
Saka sy majika: Dream Kingdom
Developer: Lalao mobile
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Freemium Cats & Magic no lalao manja indrindra izay hitanao
Ny Galaxy Tab S6 dia manomboka mahazo Android 10 miaraka amin'ny UI UI 2.1